I-Strabismus isifo somntwana omncinane
Umntwana osanda kuzalwa akayazi indlela yokulungisa izinto kwizinto. Olu buchule lubonakala kuphela ekupheleni kwenyanga yokuqala yobomi, kwaye de kube loo mzuzu kwi-strabismus ebonakalayo ebonakala ngokukhawuleza ayikho into emangalisayo. Ekugqibeleni, ukulungelelaniswa kwamehlo okunyuka kwenziwa kuphela kwiminyaka engama-2-3. I-Strabismus - ukugula komntwana omncinci kunokuthi kube ngunobangela obunzima.
Yaye ungakhohlwa ukuba abantwana bazalwa bebona ubude baze bagcine lo mbono ufike kwi-6-8 iminyaka. Ngako oko, musa ukuxhoma i-rattles, kusondele kakhulu kwamehlo: basuke bekhathele kakhulu kwaye baqala ukugaya. Kule meko, kuyinto efihlekileyo yokufihla isifo-isifo somntwana omncinci. Uphawu lwaso oluphambili kukuba i-glazik iyaphambukela kwi-axis ebonakalayo kungekhona nje ngokukhathala, kodwa nangona xa umntwana efuna ukulala, wagula, akafumani ukulala ngokwaneleyo, wayenelisekile.
Ngaba ufuna ukuzivavanya ngokwendlela efihliweyo?
Vumela upapa ukuba athathe ingqalelo kwiimvumba kwiitoni eziqaqambileyo. Ngoku gubungela enye yamehlo omntwana ngesangqa esinqunywe kwibhokisi lebhodibhodi. Hambisa isangqa ukuya kwelinye iliso, ubukele indlela yokuziphatha evulekileyo. Ukuba ukhangele into echazwe kuyo, ithetha ukuba yonke into ihlelekile. Yenza okufanayo kunye nelinye iliso.
I- glazik "ihambe" ivalwe nguwe , isuka kwi-axis eyisiqalo sokuqala, ibonisa umntwana kumzali we-ophthalmologist, nangona ukuba ingxaki leyo ingabonakali kubantu abakujikelezileyo, ukugula komntwana omncinci ngezinye izikhathi kubangela uxhalaba: ihlabathi elijikeleze ngokuphindaphinda kabini, elikhokelela ekukhatheni okwenyukayo, kwintlungu, kunye nokunyuka kwesantya. Ukuba awuyi kudokotela ngethuba, i-strabismus efihliweyo inokubonakala ngokucacileyo-enye inhlangothi okanye ishintshana, xa zombini amehlo aphelile. Ekuqaleni, umbono kubo ukhula ngokufanayo, kodwa, Ukuze siphephe ghosting izinto, engaqondanga Umntwana uqala ukucinezela umfanekiso obonakalayo iliso zitenxe. Ngenxa yoko, ukuphuhlisa amblyopia (yimfama esebenza). Iliso Eyona usempilweni, apho umntwana ngenxa squint okwethutyana awusebenzisi, kunokubangela ukungaboni.
I-Amblyopia ilula ukukhusela kunokunyanga! Kwaye iliso, elisebenzela ezimbini, linenkathalo. Unobungozi obukhulu, uqala ukujonga ngakumbi, ngokukhawuleza uyanxinwa. Ukongezelela, i-monocular (ngoncedo linye iso) umbono ayikwazi ukubizwa ngokugcwele. Akuyiyo emithathu-ntathu, kodwa isicaba. Inkwenkwe ayiboni ukuba izinto ezikude, ezikude kunye nezikufuphi zisondelelana. Ngenxa yoko iingxaki ngokuphuhliswa kweso, ukudweba, ukuphuhliswa kokuhamba kunye nokuqhelaniswa kwendawo. Umntwana onjalo unobungozi obukhulu bokulimala, kwaye xa ekhulile, kuya kuba nzima ukuba athathe inxaxheba kwimidlalo yeselula. Imfuno yokubamba ibhola, efuna ukulungelelanisa kakuhle kunye neliso, iya kumisa ekufeni. I-Strabismus - isifo somntwana omncinci asinakuqaliswa.
Kuthetha ntoni "ugqirha ubanda"?
Zokuhlambela umoya. Ngaba sele usuqhaqhazele inyanga? Ventilate nursery kwaye vumela umntwana alele ehamba nge-1-2 imizuzu.
Phinda iseshoni kathathu ngosuku, ukwandisa ixesha. Ngokuqhelekileyo vula umntwana, usebenzise ibhola elikhulu.
Ukumboza ibhola nge-diaper, ubeke umntwana kwisisu, ukukhupha izibambo, cinezela intendelezo ngokubhekiselele ebusweni bebhola uze udibanise ngeendlela ezahlukeneyo. Emva koko phinda yonke into emva. Ukucima. Ukususela kwiinyanga ezi-3-4 kabini ngosuku, gubungela umntwana ngomnquba owomileyo de ukukhanya okubomvu: ipeni, isifuba, isisu, umva kunye nemilenze.
Emva kweentsuku ezili-10 ukuya ku-14 ukuya kwee-wipe ezimanzi-kanye ngosuku. Yenza i-mitten nge-35-36 C, ngeveki-epholile (32 C), kwaye inyanga nganye iyanciphise izinga lokushisa ngeqondo, ifike kwi-30 C.
Ukumboza umntwana nge-diaper, ushiye i-handle. Yisule kwaye ugubungele ithawula elomileyo. Kwaye njalo. Ukuthanda. Emva kokuhlwaya, gcina amanzi entendeni kunye neenyawo ukusuka eshahleni uze uwahlambe ithawula. Ngendlela, ukuba ungayazi, uyazi ukuba nge-strabismus-ukugula komntwana omncinci, ukusilalisa kunceda kakhulu.
Ukungcola kucinywa kwaye kuncedise umntwana ukuba alale kangcono. Amanzi afanele abe ngama-36 C, emva kweeveki ezi-2 zinciphisa iqondo elide, zilethe kwi-30 C. Ukuba umntwana uyanyamezela, zama ukunciphisa umnyaka ukuya ku-25-26 C.
Osemncinci umntwana, inzuzo ngakumbi kwi-massage. Enyanisweni, umntwana osandul 'ukuzalwa akacebisi ukuba enze oku: umsebenzi owona mntwana ulungelelanise nokukholisa ukuzimela emhlabeni. Imithwalo eyongeziweyo ngeli xesha lingaphazamisa. Ixesha elifanelekileyo kakhulu lokuya kwi-massage kunye ne-gymnastics yinyanga e-1. Kodwa bonke abantwana bahluke: umntwana oqinileyo, osebenzayo unokwenziwa kwiveki yesine, kwaye umntwana obuthathaka, ongekho ngaphambi kwesikhathi kufuneka agcinwe ixesha elide. Ngaphambi kokuba uqale, ncokola nodokotela wezilwanyana!
Yintoni enokuyenza xa umntwana omncinci enetyhefu
Izifo zabantwana besikolo
Ukushisa ekamelweni lomntwana
Iingxaki zobuntwana be-Autism
Iibhondi zokulungiswa kokuluma kubantwana
U-Anna Bolshova uvelisa njani unyana wakhe
Ukusebenza kokuhlanjululwa kwempahla yokulahleka kwesisindo
Indlela yokunyanga i-myopia ngeendlela eziqhelekileyo?
Ngekwindla zilungele? Iimveli eziqhelekileyo zeetali zaseItali kunye neempahla zengubo 2016 ezivela kwiModoza
Isaladi "Ngaphantsi kwengubo yoboya" nolwandle olwandle
Ziziphi iiladi ezinokulungiswa ukusuka kwi-mussels
Izinwele zikaMaxim Galkin "a la Hitler" aziwaniki ukuphumla kubalandeli bakhe, ifoto
Gcina isiqwenga sasehlobo: iparsley ebusika
Isivumelwano sokuqhubha, unyango kunye neendlela zabantu
Uhlalutyo oluyimfuneko ekucwangciseni ukukhulelwa
I-Ivory luxury: igqoke lomtshato